Esi na otu esi aṅụ poults turkey n'ụbọchị mbụ nke ndụ - Ugbo ala ugbo - 2020
Ihe jikọrọ na toki poults site na ụbọchị mbụ nke ndụ
Site na ụbọchị mbụ nke ndụ ndụ mkpa nlekọta kwesịrị ekwesị. Naanị ịkwado ihe ndị dị mkpa maka ọdịnaya ha ga-enye ohere ịmịlite ụmụ ahụ ike. Ekere òkè dị mkpa na usoro a na usoro ịzụ ụmụ anụmanụ na-eto eto nwere ọgwụ dị iche iche: iji ha eme ihe na-eme ka ọganihu ngwa ngwa na uru bara uru, yana ịbelata ikekwe n'etiti ndị ọkụkọ. Akụkụ a na-akọwa ụdị ọgwụ ọjọọ kachasị dị iri maka iji nri poults, yana atụmatụ nke eji ha eme ihe.
Ihe jikọrọ na toki poults
Ndị ọrụ ugbo anụ ọkụkọ na-enyocha
Ntak ịṅụ turkey poults
N'oge mmalite nke poults, ọ dị mkpa iji nye akwa akọrọ, ihe ọzọ nke ọkụ na ọkụ, nakwa iji mee ihe oriri kwesịrị ekwesị. Otú ọ dị, n'ọnọdụ dị otú a, ha anaghị echebe ha site na ọrịa dịgasị iche iche na beriberi, nke nwere ike belata obere brood nke chicks. Maka nke a, ndị ọrụ ugbo anụ ọkụkọ nwere ahụmahụ na-eji ihe dị iche iche dị iche iche na-enyere aka na-enye aka na-enye nri, na-eme ka ọnụ ọgụgụ ụmụ na-eto eto mụbaa. N'ọdịnihu, nsị poults nri ndị nwere pụrụ iche ga-enwe obi ụtọ na onye ọbịa ha nwere oke anụ. Ngwakọta vitamin na ọgwụ nje nwere ike izute mkpa nke ahụ na-eto eto nke toki ma chebe ya site na mmepe nke ọrịa dị iche iche.
Anyị na-adụ gị ọdụ ka ị gụọ banyere ụdị ntụrụndụ nke turkeys nwere ike bred n'ụlọ, otu esi enweta oke arụpụtaghị nke turkeys, ole turkeys na okenye turkeys na-atụ, otu esi amata ọdịiche nke toki site na toki, nakwa otu esi meziwanye mmepụta mmanụ aṅụ.
Ndị ọrụ ugbo nwere ahụmahụ maara kpọmkwem ihe ọgwụ ọjọọ, na olu dị aṅaa na mgbe ọ dị ha mkpa ka e nye ha ụmụ chicks. Otú ọ dị, onye ọrụ ugbo novice nwere ike inwe ụfọdụ nsogbu na ịbanye ọgwụ ahịa. A sị ka e kwuwe, e nwere ọtụtụ ọgwụ ndị ga-adị mkpa na ụbọchị mbụ nke ndụ ndị na-eto eto. Site na mụọ nwa, poults chọrọ mmeri vitamin, ọgwụ nje, probiotics na immunomodulators. Ngwá ọgwụ kachasị elu anyị 10 gụnyere ihe kacha egosi ma dị irè.
Nke a bu ude ajuju nke eji eji agha, umu nje na nje bacteria. Mgbochi ọgwụ ma ọ bụ ọgwụ nje, ịbanye n'ọbara nke nwa na-eto eto, na-emetụta usoro nchebe nke etiti, akụkụ anụ ahụ, akpa ume na imeju. N'ihi nke a, ọrịa ndị dị njọ na-etolite na akụkụ ahụ anaghị echebe. Ngosipụta na nje bacteria na microorganisms na-eduga ná mmepe nke usoro purulent-inflammatory. Ha nwere ike imebi ụbụrụ ma kpasuo mmepe nke ọrịa ndị dị ka botulism ma ọ bụ tetanus.
Ụkpụrụ nke "Trichopol" dabeere na mkparịta ụka nke metronidazole (ihe na-arụsi ọrụ ike) na DNA nke sel nke bacteria pathogenic. N'ihi nke a, n'ihi na igbochi njikọ nke nucleic acid, mmụba nke microorganisms na-emetụta, nke na-eduga n'ọnwụ ha ọzọ.
Ị ma? Turkeys nwere ihe pụrụ iche na njirimara ha. Dịka ọmụmaatụ, na narị afọ nke 18, Lazaro Spallanzani mere nyocha nke a na-eme ka bọmbụ gọọmenti, nke tojuru na-aṅụ ya, ghọọ ntụ ntụ n'otu ụbọchị.
"Trichopol" na-emepụta n'ụdị:
uzuzu eji eme ihe ngwọta;
ngwọta maka infusion;
Ngwa: dịka mgbochi na ọgwụgwọ ọrịa na turkeys. Maka nke a na-ejikarị Trichopolum n'ụdị mbadamba ma ọ bụ ntụ ntụ.
prophylaxis - Trichopol na-diluted 0,5 g ma ọ bụ 2 mbadamba kwa 1 n'arọ nke ndepụta ma ọ bụ 1 g (4 mbadamba) kwa 5 lita mmiri;
ọgwụ - 1.5 g (6 mbadamba) kwa 1 n'arọ nke oriri ma ọ bụ 3 g (12 mbadamba) kwa 5 lita mmiri.
Usoro ọgwụgwọ bụ ụbọchị 9, mgbe e mechara eji ọgwụ ahụ eme ihe.
Ọgwụ nje, nke a na-eji mee ihe maka ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ, maka ọgwụgwọ sinusitis nje, mycoplasmosis, mbufụt nke bronchi ma ọ bụ ọrịa ndị ọzọ na-efe efe na nke iku ume. A na-eji ya na-elekọta ehi, ezì na ulo ozuzu okuko (ọkụkọ, turkeys, wdg).
Ị nwere ike ịkwalite pou poults si na àkwá na-eji incubator. Mụta otú e si agbaba nsen turkey n'ụlọ, esi eme ọkwa maka turkeys, na otu esi esi eji aka gị rụọ ya.
Isi ihe na-arụsi ọrụ ike bụ tylosin, nke na-emetụta nje bacteria dị ka:
chlamydia na ndị ọzọ.
"Farmazin" amalite mmetụta ya n'ogo nke ụbụrụ dị ndụ (ribosome), mgbe a na-egbochi njikọ protein.
Na vetaptek nwere ike izute "Farmazin" na ụdị atọ nke ntọhapụ:
Ngwa: Uzuzu di na ngwugwu ya na plastic na 25 na 200 g. Nke a bu ihe kacha mma maka ogwu nke poults. Tupu ojiji, gbanye na obere mmiri ma jikọta ihe ngwọta ahụ nke ọma. Mgbe nke ahụ gbakwunye mmiri a chọrọ iji tụọ 1 g nke ọgwụ na 1 liter mmiri. A na-atụgharị "Farmazin" na-aṅụ mmanya ma na-etinye ya na ndò, mgbe ọ na-ewepụ ndị ọzọ na-aṅụ mmanya. A ghaghị ịṅụ ọgwụ ọjọọ kwa ụbọchị.
Usoro ọgwụgwọ maka toki poults bụ ụbọchị 5, na anụ ọkụkọ ndị ọzọ - ụbọchị 3.
Ọ dị mkpa! Ngwọta maka ogwu, nke ọdịnaya nke tylosin bụ 50 mg, enweghị ike iji maka ọgwụgwọ ọkụkọ, gụnyere turkeys. Ọzọkwa, ị pụghị iji "Farmazin" nke ụdị ọ bụla maka ịgwọ ụrọ, dịka ọ nwere ike imubanye na àkwá.
Nsí a na-enyere aka n'ịlụso ọrịa ndị na-efe efe na ọrịa ọgụ. Mmetụta ịlụ ọgụ megide mycoplasmosis nke ogo dịgasị iche iche, ọnyá, bronchopneumonia, nakwa na colibacillosis na ọrịa ndị ọzọ. A na-ejikwa ọgwụ ahụ eme ihe maka prophylactic purposes, mgbe ihe gbasara nke puru ịchọta ọrịa na-arịwanye elu nke ukwuu, ya bụ, n'oge ọ na-aga nnụnụ. Ihe na-eme ihe na Enroflon bụ enrofloxacin, nke dị na ìgwè fluoroquinolone. Akụkụ a nwere nnukwu ihe mgbochi mycoplasma na ụdị njehie. Ọ na-emetụta nchichi nke enzymes, nke n'aka nke ya na-emetụta mmegharị ma ọ bụ "ịṅomi" nke helix DNA nje ahụ. A na-etinye ọgwụ ọjọọ ngwa ngwa, ebe ọ bụ na ngwa ngwa na-apụ na mmamịrị ahụ. A na-ahụ mmetụta dị irè nke ọgwụ ahụ n'oge ugbo 1-2 mgbe ọ nwụsịrị.
Mụta otu esi emeso afọ ọsịsa na turkeys, na otu esi emeso sinusitis na turkeys.
Ọgwụ dị n'ụdị:
5% ngwọta, nke nwere 50 mg nke arụsi ọrụ ike kwa 1 ml - a na-elekọta ụlọ a maka injections, ma ọ bụghị iji maka ọgwụgwọ nke ulo ozuzu okuko;
A 10% ngwọta nwere 100 mg nke enrofloxacin kwa 1 ml na-eji maka nnụnụ - a ụzọ nke onu ochichi;
mbadamba ụrọ nke 2.5 mg.
Ngwa: A na-enye ọgwụ na n'ụdị mbadamba ma ọ bụ ngwọta.
na ya dị ọcha ụdị nye 2.5-5 mg kwa 1 n'arọ nke ndụ arọ;
A gbakwunyere ihe ngwọta 10% na nri ma ọ bụ mmiri, na nchịkọta nke 0,5 mg kwa 1 n'arọ, na ya dị ọcha ka e nyere ya site na usoro 2.5-5 mg kwa kilogram.
Na poults n'etiti afọ 5 na ụbọchị 10, nkwonkwo ahụ adịghị ike, n'oge a, ha na-enwekarị ọrịa na-efe efe. Na chicks, enwere nsogbu nke usoro digestive, ọrịa ọgwụ na ọrịa oyi nwere ike ime. N'oge a, Enroflon nwere ike inye ya na mmiri dị ọcha (dissiping ya na mmiri) (0,5 ml kwa 1 l nke mmiri), ma ọ bụ 10% ngwọta (1 ml kwa 1 l). E nyere ọgwụ ahụ maka 3-5 ụbọchị.
Mụtakwuo maka nri ziri ezi nke poupts turkey, akpan akpan, kwapu poupts kwa ụbọchị.
Na-enwe obi ụtọ na ndị ọkachamara na-achọsi ike. "Tetracycline" bụ ude na-enwe usoro dị iche iche nke antimicrobial action. Usoro usoro nke ọgwụ a dabeere na nkwụsị nke ọrụ nke ribosomes bacterial bacterial.
Eji ya mee ihe banyere ọrịa na - efe efe - dịka ọmụmaatụ, respiratory mycoplasmosis, nke na-eme n'ihi hypothermia. Ọtụtụ mgbe, ọrịa a na-emepụta na chicks na usoro na-adịghị ike nke na-adịghị ike na ụkọ vitamin A na otu B. Mgbe ọ dị afọ iri na abụọ, poults nwere ike igosipụta ọrịa dịka pullorosis. A na-ejikwa Tetracycline na-emeso ya. Nsí a na-abịa n'ụdị:
mbadamba nkume na capsules nwere ọgwụ dose 100 mg na 250 mg;
ntụ ntụ na vial ahụ na ọgwụ dose 100 mg, bu n'obi maka ogwu (a na-ahụkarị aha tetracycline hydrochloride);
ntụ ntụ na vial nke 0,25 g na 0,5 g (tetrachloride);
mmanu mmanu, nke nwere 10 ma obu 30 mg nke ude na 1 g.
Ngwa: a na-eji ọgwụ nje a mee ihe ugboro abụọ n'ụbọchị n'ụbọchị ngụkọta nke 20-50 mg kwa 1 n'arọ nke arọ ahụ. Usoro nke ọgwụgwọ bụ 5-7 ụbọchị.
Ogwu nje nwere otutu ihe omuma. O nwere obere mmetụta na nsị dị ala. A na-eji ya agwọ salmonellosis, dyspepsia, colibacillosis, coccidiosis na ọrịa ndị ọzọ.
Ọgwụ a na-emetụta microorganisms ndị na-eguzogide ọgwụ na penicillin, streptotsidu na sulfonamides, ma na-egosi na ọ dịghị mma ịlụ ọgụ megide pseudomonas bacillus, bacteria na-eguzogide ọgwụ na clostridia.
Ị ma? Enwere echiche na-ezighi ezi na "Levomitsetin" na-enye aka na mgbu abdominal ma ọ bụ ihe ịrịba ama mbụ nke nsị. N'ezie, ọgwụ a bụ ọgwụ nje nke dị mma maka ọrịa na-efe efe ma ọ bụ purulenti, mana o nwere mmetụta dị njọ na imeju na akụrụ. Ya mere, ngwa dị otú ahụ adịghị echekwa, ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị nwere "placebo effect" na ihe mgbu na-agbadata.
"Levomycetin" na-eme nhọrọ na ihe ndị na-adịghị ahụkebe, ma na-egbochi ịmepụta polypeptide chains. Ọ na-echebara nke ọma ma malite mmetụta ya mgbe ọ gachara 1.5-2.
nkwusioru maka ime ojiji.
E Nwere ya na dosages nke 0.1; 0.25 na 0,5 g Ngwa: a pụrụ itinye ọgwụ ahụ na ndepụta ma ọ bụ tụgharịa mmiri.
na nri na ngụkọta nke 3-10 mg kwa chick - 2-3 ugboro n'ụbọchị, usoro ọgwụgwọ site 5 ruo 7 ụbọchị;
na mmiri na 0,5 g kwa liter, usoro ọgwụgwọ - 3-4 ụbọchị.
Nje ọgwụ ọjọọ a bụ probiotic dị ike. Vetom nwere bacteria Bacillus subtilis. Iche nke nje a na 1 g nke nkwadebe akọrọ bụ 1 nde nkeji.
Nke a bụ probiotic nwere antiviral, antibacterial, mmetụta immunomodulatory n'ahụ anụ nnụnụ ahụ. N'otu oge ahụ, ọ na - emezi metabolism, na - eme ka usoro ọnya emerụ. Vetom egosila na ọ dị irè iji gbochie ọrịa ndị dị ka salmonellosis na coccidiosis, nakwa ọrịa ndị na-ekuku ume. Mgbe o jiri ọgwụ a eme ihe, nnụnụ ahụ na-esiwanye ike na nrụgide.
Gụkwuo banyere udiri ụdị nke turkeys: Uzbek fawn, Big 6, Bronze-708, Black Tikhoretskaya, White na Bronze Na-agba ume, Onye mepụtara, Victoria.
Ọrịa bacteria Bacillus subtilis, na-abanye n'ime eriri afọ, na-enye aka na nchụpụ nke pathogens. N'ihi ya, Vetom na-eme ka microflora na-emegharị ahụ ma mezie usoro ahụ metabolic ahụ. Ọzọkwa, components nke ọgwụ a nwere ike synthesize interferon, na-amụba nnwere onwe nke nnụnụ.
A na-eji "Vetom" eme ihe na-emebi usoro nchịkọta nri, iji nri nri dara ogbenye ma ọ bụ usoro usoro mgbanwe nke nri. A na-eji ya eme ihe mgbe ọ dị mkpa iji wepụ nsogbu oriri ma ọ bụ mee ka ọnụ ọgụgụ ndị na-eto eto dịkwuo ndụ.
A na-enweta ya na ntụ ntụ, nkwakọ ngwaahịa si 5 g ruo 5 n'arọ. Ngwa: A pụrụ itinye probio a na-eri nri ma ọ bụ kpaliri na mmiri. Ọ bụrụ na ị na-eji usoro ikpeazụ nke ịgha mkpụrụ, nha ahụ dị 5 g kwa 3 lita mmiri. Usoro ọgwụgwọ bụ ụbọchị 7, mgbe nke ahụ gasịrị, a na-emegharị usoro ahụ ọzọ n'otu ọnwa. "Vetom" n'eji ya mee ihe maka ụbọchị 5 na ezumike nke otu ọnwa.
Mgbe a gbakwụnyere nri, jiri nhazi nke 1.5 g "Vetom" kwa 1 n'arọ nke ndepụta ma ọ bụ 50 mg kwa 1 n'arọ nke ịdị arọ ndụ nke chick. Iji mee ka usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ sie ike na ụbọchị iri abụọ site n'oge a mụrụ ya, na ịmeghachi ihe mgbe oge a gasịrị. Ọ bụrụ na ị na-ewe iwe, a na-eji ọgwụ ahụ eme ihe n'otu ugboro n'ụbọchị abụọ. N'okwu kachasị njọ, ugboro ole ịṅụ ọgwụ na-abawanye ruo ugboro 4 kwa ụbọchị na ugboro isii nke awa isii.
Ọ dị mkpa! Iji meziwanye microflora intestinal mgbe ọ na-aṅụ ọgwụ, Vetom na-eji usoro iri abụọ na abụọ mee ihe na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe.
Ogwu dị iche iche. O gosipụtara onwe ya n'ọgụ a na-alụ megide ihe ka ọtụtụ n'ụdị microorganisms, dịka ọmụmaatụ, mycoplasma, Escherichia, Proteus, Clostridia, Pseudomonas na ndị ọzọ. Ọgwụ ahụ dị mma ma ọ bụrụ na ejiri ya mee ihe kwekọrọ na ndụmọdụ ndị ahụ.
Ihe omimi bụ enrofloxacin. Ọgwụ ahụ abanye n'ime ahụ site na tract digestive na site na ọbara na-agbasa n'ime ahụ. Ihe ahụ na - egbochi usoro DNA ntinyeghachi nje bacteria pathogenic.
ke ntụ ntụ;
ngwọta nke 5% na 10%.
Ngwa: Enroxil ntụ ntụ na-agbakwunye na ndepụta ahụ, a na-agbakwụnye ọgwụ nje mmiri na mmanya. Maka ebumnuche prophylactic, a na-enye ọgwụ nsị poults, malite na ụbọchị 5-8 nke ndụ. Iji mee nke a, jiri ihe ngwọta 5% mee ihe. A na eji ya na 1 ml kwa 2 lita mmiri, na-emelite mmiri na onye na-aṅụ ihe ọṅụṅụ kwa ụbọchị. Usoro ọgwụgwọ ahụ ruru 3 ụbọchị.
Site n'igosipụta ọrịa ndị na-efe efe na-eji ihe ngwọta 10% nke Enroxil, mgbe ọ na-atụgharị ya na lita 5 ml na lita 6.
Ọ dị mkpa! "Enroxil adịghị ekwekọ na ọgwụ nje, tinyere tetracycline na chloramphenicol.
Ngwurugwu di iche iche di iche iche, nke bu ihe omuma ihe nke bu enrofloxacin. Ọgwụ a nwere mmetụta dị iche na nje bacteria dị iche iche: otu ọ na-ebibi kpamkpam, ebe ndị ọzọ na-egbochi ọrụ mmeputakwa. Njirimara dị otú ahụ na-enye gị ohere iji ọgwụgwọ na-ebute ọrịa (dịka ọmụmaatụ, streptococcus, colibacteriosis, salmonellosis, hemophilia na ndị ọzọ).
Ụdị ngwaahịa: "Baytril" dị n'ụdị ampoules nwere iche iche (2.5%, 5% na 10%) nke ngwọta. Ngwa: a na-agwakọta ọgwụ nje n'ime mmiri, na-ahụ ihe ruru 50 ml kwa 100 lita mmiri. Na ọgwụgwọ nke ọrịa na-ekpo ekwo, yana salmonellosis, jiri ọgwụ dị elu: 100 ml kwa 100 lita mmiri. N'oge a, nnụnụ kwesịrị iri mmiri naanị nwere mmiri. Usoro ọgwụgwọ maka pou chicklts bụ 1-3 izu. Ọgwụ ọjọọ amalite ọrụ ya mgbe minit 45 gasịrị mgbe gọọmentị gasịrị.
Ọ dị mkpa! Na usoro nke ngwa, a ghaghị icheta ya na iji "Baytril" nwere ike ịkpata mmetụta dị iche iche - dịka ọmụmaatụ, nkwupụta ụlọnga ma ọ bụ ihe nfụkasị.
Ọgwụ nke ụdị a jikọtara ya, nke gụnyere vitamin dị mkpa na amino acid, tinyere selenium. N'ihi usoro ziri ezi ya, Nutril weghachite ezughị okè, mee ka mmeghachi omume ndị ọzọ kwụsị, normalizes usoro mgbochi metabolic na ahụ, na-enyere aka ichebe ahụ pụọ na nsogbu nke ọnọdụ nrụgide.
Nkwadebe ahụ nwere vitamin A, D, E, C na K, yana vitamin nke otu B. Na mgbakwunye, Nutril nwere amino acid dị mkpa (dịka ọmụmaatụ, tryptophan) nke na-akwalite njikọ nke vitamin, hormones, enzymes and proteins. Ha na-emekwa ka usoro nke usoro immune na endocrine na-arụkọ ọrụ, ha enweghị mkpa na-ebelata arụpụta nke ulo ozuzu okuko.
"Nutril" na-enye gị ohere iji ọgwụgwọ avitaminosis, hypovitaminosis, ọrịa, ihe kpatara ya site na ụkọ selenium, yana nsogbu nke nrụgide.
Ntọhapụ akwụkwọ: ọgwụ dị dị na akpa akwụkwọ, akpa plastik na akpa, nwere oke nke 1.5 na 25 n'arọ. Ngwa: A na-atụgharị "Nutril" na nchịkọta 100 g kwa lita 200. A na-akwado ngwọta a kwa ụbọchị; A na-agbakọta olu na 500 poupts turkey. Maka nzube prophylactic, a na-eji ọgwụ ahụ eme ihe maka 3-5 ụbọchị.
Dị ka ihe mgbochi maka ọrịa ndị kpatara ụkọ nri, enwere Nutril dịka mgbochi mgbochi nke 1.5-2 ọnwa n'etiti ọmụmụ.
A na-eji ọgwụ ahụ eme ihe maka ọgwụgwọ na igbochi ọrịa ndị ọrịa na-adịghị ahụkebe (nke kachasị coccidia) kpatara. Ọgwụ a na-emetụta ụdị coccidia dị iche iche, yana nsogbu ọ na-enwe site n'ịdị na-eme ka ọ ghara ịdị irè.
Ọ dị mkpa! A na-atụ aro ịkụ anụ ọkụkọ maka anụ naanị ma ọ bụrụ na njedebe ọgwụgwọ karịa ụbọchị asatọ agafela iji wepụ mmetụta ọjọọ na ahụ mmadụ.
Toltrazuril, nke bụ otu akụkụ nke ọgwụ a, nwere mmetụta ọjọọ na pathogens ọ bụghị naanị na ọkwa dị iche iche nke uto, kamakwa n'oge oge intracellular mmepe. Na usoro nke "Baykoks" adịghị egbochi usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ, ọ dị irè mgbe ọ na-eji mgbagwoju anya nke vitamin.
Ntọhapụ akwụkwọ: 2.5% ngwọta maka nchịkwa ọnụ. Na ire ere, e nwere karama na karama dị iche iche. Ngwa: A na-eji ọgwụ ahụ eme ihe na mmiri ọṅụṅụ. 1 ml nke ngwọta Baycox na-atụgharị n'ime mmiri 1, mmiri a na-enyekwa nnụnụ a maka ụbọchị 2. Usoro ọgwụgwọ maka obere poults na-amalite site n'oge a mụrụ ya ma bụrụ ụbọchị 5-7.
Ugbu a, ị maara ihe eji ọgwụ ọjọọ eme ihe maka poults na usoro ọgwụ. Ị nwere ike ịme atụmatụ nke ị ga-azụ ụmụ chicks na ụbọchị mbụ nke ndụ ha.
Atụmatụ nri nri poults:
Ụbọchị ndụ Ọgwụ Ọgwụgwọ Rịba ama
1-2 Ascorbic acid 1% 10 ml kwa 1 liter mmiri Ị nwekwara ike iji glucose na ngụkọta nke 30 g kwa 1 liter mmiri
3-5 Ọgwụ nje "Bayril": 1 ml kwa 1 liter mmiri, nye n'ụbọchị;
Farmazin: 1 g kwa 1 l mmiri, usoro ọgwụgwọ maka ụbọchị 5 A na-emegharị usoro ahụ kwa ọnwa ruo mgbe turkeys dị ọnwa ise.
6-9 Ogbaju Ugwu Multivitamin "Nutril": maka lita 2 lita 1 g nke ọgwụ, usoro ọgwụgwọ 3-5 ụbọchị A na-emepụta ọgwụ a maka 5 toki poults.
site na 10th Mgbochi nke coccidiosis "Baykoks": 1 ml kwa 1 l mmiri, nyere maka ụbọchị 2, usoro ọgwụgwọ bụ 5-7 ụbọchị
malite na nke 20 Mgbochi nke histomoniasis "Trichopol": 1 g kwa 5 lita mmiri, usoro ọgwụgwọ maka ụbọchị 9
Dibịa na-eto eto na-achọ ọtụtụ ọrụ na nlebara anya n'aka onye ọrụ ugbo ulo ozuzu. Otú ọ dị, site n'inye ha ọnọdụ kwesịrị ekwesị maka njide, yana ịmechara ọrụ mgbochi niile dị mkpa, i nwere ike ijide n'aka na a ga-akwụghachi ọrụ a. Na mgbe ọnwa ole na ole, ahụike ma jupụtara poults na-agba agba ga-agba gburugburu saịtị ahụ.
Echere m na ọ bụ gị ... onye na-agbalị ịlanahụ nsogbu mmadụ. M na-elekọta onwe m ... ma eleghị anya ụbọchị ole na ole mbụ nke ọgwụ nje ahụ bụ ... site na coccidiosis mgbe ahụ ... site na histomoniasis ruo ọnwa atọ ịṅụ ihe ọṅụṅụ (intermittently) ... anthelmintic ugboro abụọ ... Ọ dịghị onye nwụrụ ... otu ụkwụ nwere helikopta ma ọ dịla ọnwa abụọ. Onye ozo adighi etinye aka na mmanya ma o nweghi onye nwuru ... mmadu nile tolitere. N'ihi ya, ọ bụ gị ... ma ọ bụ ahụmahụ ndị ... M nwere ike ịgwa gị site na m obere ahụmahụ ...